Diabetes – Page2– Healthy Life Journal
ဆီးချိုရှိသူက ဝဥကြာဆန်၊ ဝဥခေါက်ဆွဲနဲ့ သင့်တော်မှု ရှိ၊ မရှိ
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. အခုနောက်ပိုင်း ဆီးချိုသမားတွေ စားသင့်တယ်ဆိုပြီး ဝဥကြာဆန်၊ ဝဥခေါက်ဆွဲတွေ ခေတ်စားလာပါတယ်။ အဲဒါတွေက တကယ်ပဲ ဆီးချိုသမားတွေ စားသင့်တာပါလား။ ဆိုးကျိုးတွေကော ရှိပါသလား ဆရာမ။ A. ဝဥကြာဆန်၊...
ဆီးချိုရောဂါ ကုသတဲ့အခါ . . .
−−−−−၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊−−−−− Q. ဆီးချိုရောဂါ ကုသတဲ့အခါ ဘယ်အချက်တွေကို သတိထားရပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုရောဂါက ဘယ်တော့မှ တစ်ခုတည်း မလာပါဘူး။ အဝလွန်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ သွေးတွင်းအဆီများတာ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊ လေဖြတ်တာ...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူက ဆန်စားရမလား၊ ဂျုံစားရမလား
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေ ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားပေးသည်။ ၊—– Q. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တွေက ဆန်စားရမလား၊ ဂျုံစားရမလား။ ဆန်စားလို့ရရင် ထမင်းကို ဘယ်လိုချက်စားရမလဲ ဆရာ။ A. ဆန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးနေကျလူတွေက ဆီးချိုရောဂါဖြစ်လို့ ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ပြောင်းလဲစားဖို့...
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ဘယ်အသက်အရွယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို စတင်ပြုလုပ်သင့်ပြီလဲ ဆရာ။ A. ရောဂါမရှိတဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်က အသက် ၄၀ ကျော်ရင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခံယူသင့်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်က တစ်နိုင်ငံနဲ့...
—၊ ပါမောက္ခဦးသိန်းမြင့် (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်၊ ဆေးပညာဌာန ၊— Q. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုက ဘယ်လောက်အထိ ဆက်စပ်မှုရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကတော့ ဆက်စပ်မှု အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါမဖြစ်ခင် တစ်မျိုး၊ ဖြစ်ပြီးရင်...
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေက အဓိကအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ (Healthy Lifestyle) မရှိလို့ ဖြစ်ရတာပါ။...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအကြောင်း အမေးများသည့် မေးခွန်းများ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အမျိုးအစား(၂) ဆီးချိုရှိသူနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးက ကိုယ့်မှာရောဂါရှိနေမှန်း မသိပါဘူးတဲ့။ ဒါဆိုရင်သိအောင် ဆီးချိုစစ်ကြည့်ဖို့ အရေးကြီးတာပေါ့။ ဆီးချိုစစ်ဖို့ဆိုတာလည်း သိပ်အခက်အခဲကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ဆီးချိုတိုင်းစက် တစ်လုံးသာရှိရင် အလွယ်တကူစစ်လို့ရပါတယ်။ မရှိရင်လည်း နီးစပ်ရာဆေးခန်းတွေမှာ အလွယ်တကူစစ်လို့ရပါတယ်။...
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရှိသူတစ်ဦးက ဘီယာဝိုင်းမှာ ထိုင်တဲ့အခါ အယ်လ်ကိုဟောကို ဘယ်လောက်ပမာဏ သောက်လို့ရပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုသမားတွေ အရက်သောက်လို့ရလားဆိုပြီး ခဏခဏ မေးကြပါတယ်။ မသောက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။...